ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ထင်ရှားသော ရေတံခွန်များ
Carreck၊ Rosalind, ed. (1982)။ The Family Encyclopedia of Natural History။ The Hamlyn Publishing Group။ pp. 246–248။ ISBN 011202257 |isbn= တန်ဖိုး length စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)။